Ihe kacha mma na QGIS 3.X news - Geofumadas
Nke kachasị mma na akụkọ banyere QGIS 3.X
Eprel, 2019 innovations, qgis
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ka ụzọ mmalite Open Source siri jisie ike ịkwado onwe ha n'ụzọ kwụsiri ike ma nye ohere azụmaahịa maka ndị tụkwasịrị uru itinye aka; mgbe ikwe ka nraranye nye isi nke azụmaahịa maara na ndị ọkachamara ndị ọzọ ga-ekpuchi ihe ndị a chọrọ na azụmaahịa ha. N'etiti ụdị ndị a WordPress, PostgreSQL na QGIS kwesịrị mmasi m.
Ọ dị anya site na nke mbụ post anyị mere nke Quantum GIS 1.02 na 2009 na na Mmetụta nke QGIS 3 na 2016. Iwuli elu na ihe niile ọ choro egosila na ọ bụ ọrụ nke ndị na-akwado ya, itinye aka n'akụkụ nke mmepe obodo mana karịa nnabata niile nke ndị ọrụ bụ ndị, karịa atụmanya, tozuru oke nghọta; karia ndi Taliban gbasoro ihe ndi mmadu choro, gbadoro anya nke ike nke QGIS. N'isiokwu a, site n'echiche anyị, anyị ga-egosi ụfọdụ ihe ọhụụ na arụmọrụ nke mgbanwe ndị na-adịbeghị anya ọbụlagodi ihe egosiri mgbe amaokwu a gasịrị, nke anyị maara na ọ gaghị abụ nke ikpeazụ.
“Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa ntọhapụ nke QGIS 3.6 'Noosa'! Noosa bu ebe nzuko nke ndi mmepe obodo Australia na odida nke 2017. " Blog Blog
Site na 2.8 Las Palmas mbipụta, elele anya interface ahụ ka mma, ya na ngosipụta kachasị emelite nke bọtịnụ rụọ ọrụ na menu ndị isi. Na nke ikpeazụ a mara, 3.6 Noosa, ị nwere ike ịnọgide na-ahazi, ịmegharị na profaịlụ ọrụ na ihe anya gị chọrọ. Anyị nwere ike ịga site n'ile anya na elele anya abalị, na-enyere ndị na-etinye ọtụtụ awa n'ọrụ dị iche iche.
Maka Qgis 3.4, ịbanye n'ime nhọrọ tinye-ons, ebe ahụ ka nhọrọ ahụ dị Gburugburu QSS - UI gburugburu, na nyocha ọchụchọ, na mgbe ị wụnye, na ndepụta tinye-ons, ị ga-ahụ nhọrọ Ibu Ibu UI. Site na windo nwere ike ịhọrọ n'etiti nhọrọ niile ọ bụla kwesịrị ekwesị.
Maka mbipụta 3.6, a ga-ejikọta nhọrọ Maapụ Maa, a pụkwara ịrụ ọrụ site na Njirimara nke interface ahụ, ka ị ghara ibudata ma tinye mgbakwunye.
Na isi echiche, agbakwunyere igbe nchọta, nke anyị nwere ike ịchọta ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ngwa ngwa; dị ka, dịka ọmụmaatụ: nghazi, nhazi, nhazi algọridim, ichota usoro nke oru ngo, ma ọ bụ ihe nrịbama spatial.
Na windo ihe onwunwe nke oyi akwa ahụ, agbakwunyere igbe nchọta ahụ, ebe ị nwere ike ịchọta atụmatụ ma ọ bụ usoro jikọtara na oyi akwa. Dịka ọmụmaatụ, a na-etinye okwu ahụ na nyocha ọchụchọ àgwà (1) ịpụta na panel atụmatụ na arụmọrụ nke oyi akwa, ndị niile na iwu na-ebu okwu àgwà (2), mgbe ahụ, ma ọ bụrụ na anyị họrọ otu n'ime ha, ị pụrụ ịhụ na otu nhọrọ nwere okwu àgwà (3).
Mgbe n'ịrụ ọ bụla usoro oyi akwa, dị ka nzacha àgwà, e nweghị ihe gosiri na ga-apụta na-edo nwere a iyo. Ọhụrụ ndị a na nsụgharị, ma 3.4 dị ka 3.6, e kwukwara usoro egosi na n'ígwé, dị ka e gosiri na ndị na-esonụ image, nke mere na nyocha nwere ike ịhụ nke onye na-ẹdụk, egbochi ma ọ bụ Ụdị ụdị ehichapụ.
Na mmelite ndị a kachasị ọhụrụ, enwere ike ịmepụta ihe eserese eserese, na-akọwapụta profaịlụ nke onye ọrụ ga-eme mgbanwe ma ọ bụ dezie ya. Na nchịkọta nhọrọ; Enwere ike ịmepụta profaịlụ onye ọrụ dị ka ihe achọrọ na ọrụ nke profaịlụ ọ bụla na-echekwa na folda mgbọrọgwụ nke Qgis 3. pathzọ ahụ bụ ihe dị ka nke a maka ndị ọrụ Windows: C: \_ Onye ọrụ \_ AppData \_ Roaming \_ QGIS \_ QGIS3 \_ profiles \_ default
N'ihe banyere nhazi maka ndị na-azụ anụ ma ọ bụ nke raster, a na-esonye nkwụsị nke algọridim, a gbakwara ụfọdụ ndị mma maka ahụmịhe ọkachamara ka mma
Mgbe ịbanye na kọntaktị na-enweghị usoro ntụpọ akọwapụtara, ngwa ahụ ga-arịọ ka ị gosipụta ihe ọnọdụ ọnọdụ nke data ndị a ga-abụ. A windo meghere, ebe ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ usoro nhazi site na gburugburu ụwa, na ala ya, a gosipụtara ọnọdụ nke usoro a họọrọ, na eserese ma ị nwere ike ịchọpụta na ọ bụrụ na ọ dị mma, tupu igbakwunye a na-emepụta data ahụ ma mezie nsogbu ebe.
Ndị ụlọ ọrụ mbipụta ugbu a dị mfe karị, dị ka nke na-enweghị ngọngọ ma ọ bụ ndị polygonal entities, Otú ọ dị, ị ga-agbanye ma gbanwee edezi, ọbụlagodi maka mbipute 3.4. Ejiri ngwá ọrụ ndị dị ka: ịkụgharị nke ụlọ ọrụ, akwụkwọ nlele, na mgbanwe nke ntụziaka -invert line-, ma ọ bụ na-agagharị na paradaịs nke otu ma ọ bụ niile n'ígwé. Maka nsụgharị 3.6 Noosa, a ga-atụ anya na ị ga-agba ọsọ algorithms na-agba ọsọ n'oge edezi, iji zere ịmepụta ọkwa ọhụrụ.
Na nhazi ngwá ọrụ, enwere ọrụ maka ịhọrọ ihe dị n'ime ụlọ ọrụ dịka ụdị dị iche iche, dịka: nhọrọ site na njirimara, nhọrọ site na nkwupụta ma ọ bụ site na ọnọdụ. Ndị mmepe nke Qgis 3.6, akọwapụtala ụdị nhọrọ nke ọzọ, nke a na-ahọrọ site na uru, jikọtara na àgwà ndị dị na njirimara vector.
Otu nke na-arịọ mere ndị ọrụ, bụ iwebata CADtools zuo ezu na 3.6 version, n'ihi na ọ bụla nke na nsụgharị 3.X, e ekekerede, ma wụnye tinye-ons manager gosiri na ọ bụ ihe ochie version a na-apụghị gburu .
Ịdebanye aha bụ usoro ọzọ edozila n'ụzọ ọ bụla. Ọ dị mfe ịmepụta otu okwu dị mfe ma ọ bụ mepụta aha ndị ụlọ ọrụ dabere na iwu. A ga-agbakwunye nhọrọ ndị a igbochi, nke a na-enyere aka na n'oge a na-ahapụta aha ndị ọzọ, ha nwere ike igbochi njirimara nke ụlọ ọrụ ahụ, nke na-egbochi oyi akwa.
A gbanwere atụmatụ ọhụrụ ma gbakwunye iji nweta symbology a chọrọ ya ngwa ngwa, dịka bọtịnụ nnweta - aka nri na oyi akwa - na ụdị nke ụlọ ọrụ ahụ. Na Qgis 3.6 Noosa, a na-atụkwasị akụkụ ụfọdụ dị ka ngosipụta nke ụdị xml, na nchịkọta ihe nchọgharị ma ọ bụ iwu.
Ma ihe ndị usoro metụtara raster, ọtụtụ algọridim e kwukwara maka mmịpụta, na analysis. Ọ complemented niile gara aga atụmatụ, ịgbakọ ọnụ ọgụgụ nke a raster dabeere ọzọ ngụkọta oge olu na mpaghara, mwube M ụkpụrụ, mwube ụkpụrụ Z dị ka vertices nke ọ bụla ìgwè, ma ọ bụ adịrị ọdịnaya usoro ọnụọgụ abụọ - na ụdị wijetị maka mpaghara ọnụọgụ abụọ (blob) -. Ọzọkwa, na nke a, ọ gụnyere ihe pụrụ iche ụkpụrụ renderer, na nrịbama raster image.
Maka data 3D, a na-agbakwụnye nhọrọ ndị ọzọ dịka ntụgharị nke ala, ya bụ, onye nyocha ahụ ga-enwe ike ikpebi ụzọ e si etinye ihe nlereanya ya. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmezi ọkụ na ihe ngosi 3D, ebe ị nwere ọkụ 8 maka ọnọdụ, ike, agba na attenuation.
Mma njikwa, gụnyere ọrụ dị ka mwube oru ngo nchekwa, dị ka a na-eme na ArcGIS Pro, n'ihi na ihe atụ, nwere ike na otú a ga-echekwara na otu ebe niile usoro na oru ngo-metụtara ngwaahịa. Na nkpuchi Malite nke oru ngo, arụ ọrụ mmalite, ya bụ, ụzọ ebe data ga-edozi bụ
Akụkụ ọzọ abanyela n'elu ikpo okwu bụ ikike ịhụ echiche dị iche iche nke maapụ ahụ, gụnyere ndị nwere data 3D. Site na isi menu, na nhọrọ nlele, enwere ohere abụọ iji tinye echiche, nlele map 2D (nlele map ọhụrụ - ctrl + M) ma ọ bụ nlele map 3D ọhụụ. Mgbe ịhọrọ ụdị echiche iji gbakwunye, enwere ike itinye ha n'ụzọ dị iche iche ma tinye ya na isi echiche, site na otu akụkụ - ogwe aka nri - ebe ahụ ị nwere ike itinye echiche abụọ ma ọ bụ kwekọọ na isi ele.
Site na itinye ndị multiviewers, ị nwere ike ịchọpụta ụfọdụ akụkụ nke map nke a na-agaghị ahụ na mmepụta ikpeazụ nke ngwaahịa ahụ. Windo ọhụụ ọ bụla jikọtara ya na njirimara nke interface ahụ, na mgbakwunye na ịmekọrịta ma ọ bụ na data adịghị na windo ahụ, na-elele data ahụ kpọmkwem, na-egosi annotations, ọnọdụ nke cursor ma ọ bụ aha.
Ọ bụrụ na anyị alaghachi n'oge gara aga, ma na-arụ ọrụ na ngwa ọrụ a maka nsụgharị ndị gara aga, onye ọ bụla ga-ekweta na ọ dị nnọọ mgbagwoju anya na cumbersome; ruo mgbe ị ga-eru ebe ebe e si nweta ihe ọmụma ahụ ma ha chọrọ iji usoro ndị ọzọ iji meepụta ngwaahịa ikpeazụ. Maka nsụgharị ọhụrụ ndị a, a mezila uru a n'ime, na-enyekwa ohere maka ibipụta echiche 3D. Onye nyocha nwere ike ịmepụta otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwugwu nke otu echiche ahụ, na mgbakwunye na ịnwe ike ịgbakwunye peeji nke ya.
Tụkwasị na ihe niile a kpọtụrụ aha, a na-agbakwụnyekwu atụmatụ, na ohere nke iwebata ụdị data ndị ọzọ dịka: Nkwado maka 3D Mesh - na ihe niile gụnyere njikwa nke data a, dị ka njirimara nke ihe-.
Nchịkọta na foto geotagged
N'ime Qgis, ojiji nke na nchịkọta, ya mere, ha debere nkwakọ ngwaahịa nke n'ígwé n'ime nhazi ngwá ọrụ - ọ na-adọrọ m n'anya nke ukwuu dị ka m mere na ArcGIS Pro-.
A na-atụ anya na ngwaọrụ ndị ọzọ a pụrụ iji mee ihe na 3.4 mbipute ga-anọgide na-agụnye, n'etiti nke a nwere ike ịkpọ aha: mbubata foto ndị e ji geotagged-etinye na nhazi ngwá ọrụ. Site na ngwá ọrụ a, a na-emepụta akara ngosi ebe, ebe a na-ahụ ihe oyiyi geo-tagged ma ọ bụ geolocated. Ihe oyiyi a ga-adị na usoro JPEG, a ga-edebanye ndekọ niile n'ime usoro ahụ, si otú ahụ na-emepụta ngwaahịa spatial na njirimara elu.
Ozi ndị ọzọ Qgis 3.6
Na mgbakwunye na ihe niile e kwuru na mbụ, ihe ndị na-esonụ, ọrụ na add-ons na-agbakwunyere, nke a na-esonyere na ụdị na-adịghị na ntụgharị 2X, gaa na nke a:
Onye nchịkọta data nke data na-akwado ihe e kere eke nke nkedo nke ọma, ụdị data ntanetị - nhazi data, na geopacks -
Obodo nke ndị ọrụ na ndị mmepe, ekwuwo na ojiji asụsụ C +, maka nhazi ma ọ bụ mmelite nke algọridim ndị dịbu.
Ohere nke imepụta edemede, ichikota ma bikọta ha bụ eziokwu. O mekwara ka ndị na-arụ ọrụ rụọ ọrụ, ọrụ dịgasị iche iche nke ga-enyere aka rụọ ihe ngosi n'ụzọ dị mfe.
A na-egbu usoro ma ọ bụ ọrụ na ndabere, n'ihi ya, ha anaghị egbochi ha ịhụ mmemme ndị ọzọ.
Ọtụtụ -gụnyere anyị- Anyị ajụọla ajụjụ na forums gbasara ụfọdụ njirimara, ngwaọrụ ma ọ bụ ọrụ Qgis, n'ihi enweghị akwụkwọ nke ọtụtụ n'ime ihe ndị a. Maka nsonaazụ ọhụrụ a, onye na-emepụta ihe egosipụtawo ịdị adị nke akwụkwọ kachasị mma maka usoro na ngwaọrụ ndị na-eme GIS a.
Otu n'ime arụ ọrụ nke ntakịrị ihe ekwuru, mana anyị na-atụ anya iji gosi, bụ oge nkwụsị oge, nke metụtara ọmụmụ ihe ọtụtụ ugboro.
Akụrụngwa ngwanrọ maka onye na-ahụ maka racker.
Nkwado JSON maka nchịkọta geo.
"QGIS bụ software n'efu na ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla iji ya. N'ezie, anyị chọrọ ịgba ndị mmadụ gburugburu ụwa iji ya, n'agbanyeghị agbanyeghị ego ma ọ bụ ọnọdụ ha. Anyị kwenyere na ịkụziri ndị mmadụ ihe eji eme mkpebi gbasara oghere ga-eme ka ọha mmadụ ka mma karịa mmadụ niile. "Qgis blog
Dika ndi nyocha na ndi choputara na mpaghara Geographic Information Systems, ihe nchoputa a gbasara mbara igwe, na 3.6 Noosa version, nwere ike inye ndi mmadu uru karia owu ihe. Na peeji nke Qgis, bụ nsụgharị ndị a kọwara n'isiokwu a. Ihe dị iche n'etiti onye nke ọ bụla bụ na 3.4 Madeira bụ mbipute mbipụta oge dị ogologo, na nhazi nke ahụhụ na-eme n'oge ọ na-eji ya eme ihe. N'aka nke ọzọ, mbipute 3.6 Noosa bụ nsụgharị dịkwuo mma maka atụmatụ maka ọgwụ ahụ riri ahụ, mana enwere nkwenkwe ike, ma enwere ike ịme ya chinchi n'oge ojiji ya.
Previous Post«Previous #BIM - Usoro nkuzi eji arụmọrụ eji AutoDesk Robot Structure
Next Post Ebe nrụọrụ weebụ nke map ndị dị na mbụ n'etiti Mpịakọta Maapụ 28-124Next »